မှားယွင်းနေသည် Window 1 months ago 11 တစ်နှစ် #1169
အသက်ကြီး. အနားယူလေယာဉ်မှုးအဖြစ်ငါသဘာဝကျကျထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို Tu727, An707 ကဲ့သို့သော B154, B24 နှင့်ရုရှားလေယာဉ်တစ်စင်းအဖြစ်အဟောင်းတွေမော်ဒယ်များမှဆွဲဆောင်နေပါတယ်
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မ B7 *7နှင့် 727 နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်ခဲ့ရသည်။ ဒီလို Tu154 နှင့်စနစ်သည်ရဲ့အဖြစ်ရုရှားမော်ဒယ်များ install လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါသို့သော်ကျွန်မပူးတွဲအမှားဝင်းဒိုးကိုရယူပါ။
Tu134 အတန်ငယ် dithered ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများအတွက် မှလွဲ. ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းသောအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် TheSteelWolf. Reason: misspelling